HIM | Health in Myanmar » 2011 » April
ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများအရေး ကုလ ဆွေးနွေးမည်
ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများကို ကူညီရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မေလ ဒုတိယအပတ်တွင် တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူ၌ ၅ ရက်ကြာ အစည်းအဝေးတရပ် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားပြီးခြင်း ဖြစ်သည်။
Here are the key points from HATIP 176 on antiretroviral adherence. These are important points for all ART providers. The document is attached.
******** Hot-Line HIV Counseling Service from HIM *********
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmarno comments
အမည်ပြောစရာမလိုပါ…။ ဆွေးနွေး ပြေားကြားသမျှကို အထူးနှုတ်လုံစွာ ထိန်းသိမ်းလျှို့ဝှက် ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ကြိတ်မှိတ်ခံစားနေမယ့် အကြောင်းရာတွေ အတွက် ရင်ဖွင့်ဖို့ နေရာတစ်ခုက လက်ကမ်း ကြိုဆိုပါတယ်……။
အပတ်စဉ် စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ 09-430-550-45 ဖုန်းက နံနက် ၈း၀၀ နာရီကနေ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီထိ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အထူးကဏ္ဍအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပါကြောင်း …..။
Does the Shwe Consortium have HIV prevention and care activities?
HIV/AIDS is mentioned in this article. What does the Shwe Consortium do on HIV prevention and care?
Comment on picking up used syringes
The [him] moderator received the following comment on the article on harm reduction at the Manau grounds.
မူးယစ်အပ် မကင်း မနောကွင်း
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မုန်ခေါမ်း၊ ဘန်ဖစ်၊ မုန်းရာ၊ မန်ဖ၊ မန်ကျောက်၊ မန်အော် စတဲ့ ရွာငယ်တွေမှာလည်း ကချင်လူငယ် ၁ဝဝ ကျော် မူးယစ်ဆေးသုံးတယ်လို့ အဲဒီဒေသနေ ကချင် လူငယ်တဦးက စာနဲ့ ရေးပြောပါတယ်။
Harm reduction near the Manau grounds
People who live near the Manau grounds have to decide whether they would prefer that these young people who use drugs were dead.
FaceBook မှာ အဖော်ရှာတဲ့၊ ထိုင်းလူမှုဝန်းကျင်ကို အားကျတဲ့ မြန်မာဂေးများ
မြန်မာပြည်လိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုနေတဲ့ အိမ်နီးချင်းထိုင်းမှာတော့ ဂေးတွေ၊ ခွဲစိတ်ပြုပြင် လိင်ပြောင်းထားသူ တွေကို လက်ခံကြ အသိအမှတ်ပြုကြတာ အတော်လေးများပါတယ်တဲ့။
First glimpse of the post Harry era
Here is the first glimpse at the post Harry era. HIV is still on the list of most serious diseases.
Author: HimBur | Category: Myanmar, အင်တာဗျူးno comments
လိင်အင်္ဂါရေယုံ တခါပေါက်ပြီးတဲ့ လူဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ အခုကျွန်တော်တို့ ဆေးကုသလို့ ပျောက်သွားပေမဲ့ ဒီပိုးဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ တသက်လုံးရှိတော့မှာ ။ မပျောက်သွားဘူး၊ကုန်အောင်လုံးလုံး လုပ်လို့ မရဘူး။ နောက်တချိန်မှာ နောင် တနှစ်တန်သည်၊ နှစ် နှစ်တန်သည် ပြန်ပြန်ပြီး သူဟာသူ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆက်ဆံပဲနဲ့ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။
Antiretroviral treatment at the Mae Tao clinic
“Cho Cho” has been working in the sex industry for fewer than three years but has already been infected and hasalow CD4 count. The [him] moderator finds this to be an unusual story. Even if she was infected on her first day working, she would not yet be immunocompromised.